192 Xubnood Oo Xirfadlayaasha Caafimaadka-Xoolaha Iyo Beeraha Ah Ayaa Loo Furay Tababar - Cakaara News
192 Xubnood Oo Xirfadlayaasha Caafimaadka-Xoolaha Iyo Beeraha Ah Ayaa Loo Furay Tababar
Jigjiga(cakaaranews)Talaado 4ta July 2017. Xirfadlayaasha beeraha iyo caafimaadka xoolaha oo tiradoodu dhantahay 192 xubnood islamarkaana kakala yimid 16 degmo oo deegaanka ah ayaa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga loogu bilaabay tababar kaasoo socon doona mudo 20 cisho ah.
Hadaba, tababarkan oo soo agaasimay mashruuca horumarinta reeguuraaga ee looyaqaano PCDP ayaa waxaa furitaankiisii kahadlay Wasiirka Xafiiska Xoolaha iyo Horumarinta Reerguuraaga marwo Maajida Maxamed Maxamuud oo sheegtay in tababarkani yahay mid xirfadlayaasha lagu barayo casharo laxidhiidha xirfadooda islamarkaana ay muhiim tahay in ay sifiican uga faaiidaystaan tababarku intuusocda kadibna cilmigii ay barteen ay kadhaqan galiyaan goobihii iyo degmooyinkii kakala yimaadeen.
Sidookale, Maareeyaha Mashruuca Horumarinta Bulshada Xoolodhaqatada ah Mudane Cabdifataax Axmed Ismaaciil oo sheegay in tababarkani uu yahay mid kasocda dhamaan deegaanka oo dhan islamarkaana ujeedadiisu tahay in kor loogu qaado aqoonta xirfadlayaasha xoolaha iyo beeraha ee deegaanka. wuxuuna intaa kudaray in tababarkan uu lasocdo qalab korloogu qaadayo awooda goobaha iyo xarumaha caafimaadka xoolaha iyo waliba xafiisyada iyo goobaha xirfadlayaasha beeraha.
Sikastaba ha ahaatee, tababarkan ayaa waxaa lasiinayaa xirfadlayaal kakala socda 16 degmo oo kakala tirsan 4 gobol oo deegaanka ah. Waxaana laga filayaa in wax wayn katari doono awooda fulineed ee xirfadlayaasha